Madaxweyne Farmaajo oo khadka telfoonka kula hadlay dhigiise Uhuru Kenyatta | Somali National Television - sntv.so
Home VILLA SOMALIA Madaxweyne Farmaajo oo khadka telfoonka kula hadlay dhigiise Uhuru Kenyatta
Madaxweyne Farmaajo oo khadka telfoonka kula hadlay dhigiise Uhuru Kenyatta
Muqdisho (SNTV) Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa dowladda Kenya iyo shacabka ug atacsiyadeeyey dadkii ku dhintay weerarkii Talaadadii ka dhacay Dusit2d hotel ee magaalada Nairobi.
Qoraal kooban oo la soo dhigay barta Twitterka uu ku leeyahay madaxweynaha Soomaaliya ayuu ku sheegay madaxweyne Farmaajo in uu khadka telfoonka kula xiriiray madaxweynaah Dalka Kenya Uhuru Kenyatta,una muujiyay in ay Soomaaliya ay garab taagan tahay shacabka Kenya.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay diyaar u tahay sidii la isaga kaashan lahaa cirirtirka falalka argagixisanimo.
Weerarkii lo adeegsaday qaraxyo iyo rasaas ayaa khasaaruhu wuxuu gaaray ilaa 21 qof,19 kale oo la la’layahay iyo 700 oo qof oo laga soo badbaadiyay weerarkaasi sida ay sheegeen mas’uuliyiinta dowladda Kenya.
Previous articleDowladda Qadar oo Gaadiid Ciidan ugu deeqday Soomaaliya
Next articleBoliiska Kenya oo Hotelka Dusit2d ka helay walxaha qarxa